Firewall | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Asus Zenfone5 ဖုန်းတွေရဲ့ Firmware လေးများ
Asus Zenfone5 ဖုန်းတွေ Firmware ပြန်တင်တဲ့ အခါ ကြုံရတဲ့ ပြသနာက Zenfone5 မှာ CPU နှစ်မျိုးနဲ့ ဈေး
ကွက်ထဲကို လာပါတယ် နောက်ပြီ သူမှာ နိုင်ငံ အမှတ်သာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေလဲ ရှိပါတယ် ကိုယ်က
နိုင်ငံ ကုဒ်မတူ တဲ့ Firmware သွားတင်လို့ မရပါဘူ Error တက်ပါတယ်
T00J မော်ဒယ်နံပါတ်ဆို Zenfone5cpu 1.6 ဖြစ်ပါတယ်
T00F မော်ဒယ်နံပါတ်ဆို Zenfone5cpu 2.0 ဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံ အမှတ်သာတွေ ကတော့
WW = worldwide (international)
CHT စတဲ့ ကုဒ် အမှတ်သားလေးတွေ မှန်အောင်ရွေးပေးမှ Flash တဲ့ အခါ Error မတက်မှာပါ အောက်က လင့်
မှာ Zenfone5 Firmware တွေ အကုန် စုစည်းထားပါတယ် လိုအပ်ရင် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
▼ drive.google ▼
ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
ကဏ္ဍ Asus, Firewall, Phone Application
Huawei Honor H30-U10 4.4.2 Firmware EMUI 2.3 with MM Font
ဈေး ကွက် ထဲမှာ လူ ကြိုက် အများ ဆုံး ဖြစ်တဲ့ Huawei ရဲ့ Honor ဖုန်း လေး အတွက် အသစ် ထွက်ရှိ လာတဲ့ Android
version 4.4.2 Firmware လေး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ 4.4.2 မှာ တော့ Emotion UI 2.3 နဲ့ ထွက် ရှိ လာခဲ့ ပြီး Feature နဲ့
အ ပြင် အ ဆင် တွေ က တော့ Ascend P7 နဲ့ တူ ညီ သွား ပါ တယ် ။
ယ ခု ပေး ထား တဲ့ 4.4.2 Firmware မှာ တော့ မြန် မာ စာ ပါ တ ခါ တည်း ပါ ပြီး သား ဆို တော့ Root ဖောက် စ ရာ
-တောင် မ လို တော့ ဘူး ပေါ့ ... ။
လို အပ် တယ် ဆို ရင် တော့ အောက် မှာ ရ ယူ နိုင် ပါ တယ် ဗျာ ...။
အ ဆင် ပြေ ကြ ပါ စေ... ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 09, 20142comments:
ကဏ္ဍ Android, Firewall, Huawei, Phone Application
Windows Firewall Control 4.1.0.2 Multilingual Latest Version Free Downlaod
Windows Firewall Control 4.1.0.2 Multilingual | 420.50 KB
Downlaod link: Windows Firewall Control 4.1.0.2 Multilingual ( 420.50 KB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 19, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Firewall, Window
Keylogger ရန်မှ ကာကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ - Spyshelter Firewall v3.0 + Loader
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Software လေး ကတော့ Spyshelter Firewall ဆိုတဲ့ Software အသစ်လေးပါ။
သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ Keylogger တွေရဲ့ ရန်မှ ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ Account
တွေရဲ့ User Name & Password တွေ ၊ မိမိ ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ အချက် အလက်တွေ ကို လုံခြုံ စိတ်
ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Spyshelter Firewall လေးကို အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Spyware, Keylogger,
Trojan အပြင်အခြားသော Virus များစွာကိုလည်း Remove လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင်တယ် ဆိုရင် အောက် မှာ မူရင်းဆိုဒ် ကနေရှင်းပြ ထားတာကို ဖော်ပြပေး
Hackers today can use near limitless methods to steal your personal information and affect your life.
By adding the SpyShelter Firewall software to your digital security plan, your information will be safe and secure, guaranteed.
By knowing that your information is secure, you can turn your efforts towards family, friends, work, or even some much needed relaxation time.
The SpyShelter Firewall providesalong list of features to protect your information that include:
Application protection upon execution
Fully compatible with Windows x32/x64.(World’s first 64 bit anti keylogger)
Windows Firewall Control 4.0.8.2 Multilingual Full Version Free Download
Windows Firewall Control 4.0.8.2 Multilingual | 367.48 KB
This is the best tool to manage the native firewall from Windows 8, Windows7and Windows Vista.
Download Windows Firewall Control 4.0.8.2 Multilingual ( 367.48 KB )
Windows Firewall Control 4.0.6.2 Multilingual
Windows Firewall Control 4.0.6.2 Multilingual | 345.23 KB
Download Windows Firewall Control 4.0.6.2 Multilingual ( 345.23 KB )
Outpost Firewall Pro v9.0.4535.670.1937 ML (32 & 64 bit) with Key
zippyshare solidfiles tusfiles
VIP Downloads by Asad Jan
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 21, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Firewall, Security